UTC, GMT, ary ny fotoana i Zulu manazava
Ireo mpahay siansa manerana izao tontolo izao Ampiasao ny fotoana mitovy
Rehefa mamaky ny toetr'andro sy ny sarintany ianao dia mety mahamarika tarehimarika efatra isaky ny taratasy "Z" any amin'ny farany ambany na ambony. Ity alalana ity dia antsoina hoe Z time, UTC, na GMT. Ireo telo ireo dia fenitra ara-potoana eo amin'ny fiarahamonina sy toetrandro ary mitazona ny mpikaroka ny mpikaroka - na aiza na aiza misy azy manerana izao tontolo izao-amin'ny fampiasana ny famantaranandro 24 ora ihany, izay manampy amin'ny fisorohana ny fikorontanana rehefa manamarina ny toetr'andro eo anelanelan'ny vanim-potoana.
Na dia ampiasaina amin'ny fomba ofisialy aza ireo teny telo ireo, dia misy fahasamihafana kely misy dikany.
GMT Time: Famaritana
Greenwich Mean Time (GMT) dia ny fotoan'ny famantaranandro ao amin'ny Prime Meridian (0º longitude) any Greenwich, Angleterre. Eto, ny teny hoe "midika" dia midika hoe "salan'isa." Midika izany fa ny mitataovovonan'ny GMT dia ny fotoana isaky ny taona isan-taona rehefa mipaka any amin'ny tendrony avo indrindra any an-danitra ny Meridian Greenwich. (Noho ny haavon'ny tsy fahampian'ny tany ao anaty baoritra elliptika sy ny fihodinan'ny familiana, ny Alakamisy GMT dia tsy voatery foana rehefa mandalo ny Meridian Greenwich ny masoandro.)
History of GMT. Ny fampiasana ny GMT dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-19 tany Grande-Bretagne rehefa nanararaotra ny fotoana tao amin'ny Greenwich Meridian ny tantsambo Britanika sy ny fotoana teo amin'ny toeran'ny sambo mba hamaritana ny lanjan'ny sambo. Noho ny UK dia firenena maritiora tamin'izany fotoana izany, ny tantsambo hafa dia nanaiky ny fampiharana ary dia niely eran-tany ho fivorian'ny marimaritra iraisana tsy miankina amin'ny toerana.
Ny olana amin'ny GMT. Ho an'ireo tetikasa astronomie, ny andro GMT dia nolazaina nanomboka tamin'ny mitataovovonana ary mihazakazaka hatramin'ny mitataovovonana ny ampitson'iny. Izany dia nanamora kokoa ny astronoma satria afaka nanokatra ny tahirin-kevitra momba azy ireo izy ireo (nalaina nandritra ny alina) teo am-piandohan'ny daty. Saingy ho an'ny olon-drehetra dia nanomboka tamin'ny misasak'alina ny andron'ny GMT.
Rehefa niova ny fivoriambe tamin'ny misasak'alina tamin'ny taona 1920 sy 1930, dia nomena ny anarana vaovao amin'ny Time Universal mba hialana amin'ny fisavorovoroana.
Hatramin'io fanovana io, ny term GMT dia tsy ampiasaina betsaka intsony, afa-tsy ireo monina any Angletera sy ny firenena Commonwealth izay ampiasaina mba hamaritana ny fotoana ao an-toerana mandritra ny volana ririnina. (Io dia mifanohitra amin'ny Time Us Standard eto Etazonia.)
UTC Time: Famaritana
Ny Coordinated Universal Time dia dikan-teny maoderin'ny Greenwich Mean Time. Araka ny voalaza etsy ambony, ny andian-teny, izay manondro ny GMT araka ny voaisa tamin'ny misasakalina, dia noforonina tamin'ny taona 1930. Ankoatr'ity, ny iray amin'ireo fahasamihafana goavana eo amin'ny GMT sy UTC dia tsy mitandrina ny Time Saving Time ny UTC.
Fanoroana an-tsokosoko. Manontany tena foana ve ny antony tsy ahafahana manadino ny fomban'ny Coordinated Universal Time? Amin'ny ankapobeny, UTC dia mampihorohoro ny Anglisy (Coordinated Universal Time) sy ny fehezanteny frantsay (Time Universel Coordonné). ny fampiasana ny fanoratana ofisialy mitovy amin'ny fiteny rehetra.
Ny anarana hafa amin'ny UTC Time dia "Zulu" na "Z Time."
Zoloa Time: Famaritana
Zulu, na Z Time dia UTC Time, amin'ny anarana hafa ihany.
Mba hahalalanao ny toerana misy ny "z", diniho ny faritra misy izao tontolo izao.
YEach dia noheverina ho ora maromaro "alohan'ny UTC" na "any aoriana". (Ohatra, UTC -5 dia Eastern Standard Time.) Ny taratasy "z" dia manondro ny faritry ny Greenwich, izay ora ora (UTC + 0). Hatramin'ny alfabeta fonetika OTAN ( "Alpha" ho an'ny A, "Bravo" ho an'i B, "Charlie" ho an'ny C ... ) ny teny z dia Zulu, antsointsika hoe "Time Zulu".
Ianaro ireto fampihetseham-batana tanana ireto
Inona no atao hoe Blueshift?
Ny fomba hiomanana amin'ny siramamy Lab
Inona no fahasamihafana misy eo amin'ny siantifika sy ny teôria sy ny lalàna?
Loharanon'ny famokarana herinaratra
Understanding Plastics Polypropylene
Iza no nandinika ny lalàn'ny hetsika miparitaka? Johannes Kepler!
Ohatra miovaova sy tsy miankina
Nahoana no maty ny Ranomasina Maty?
Ady faharoa: ady voalohany tao El Alamein
Ny tantaran'ny Neon famantarana
Ny Tantaran'ny Halloween sy Samhain
Strategies for Writing Teaching
Facts Actinium - Element 89 na Ac
Earl Warren, Filohan'ny Fitsarana Tampony
Ahoana ny fametrahana fiara fitateram-pahefana
Inona no atao hoe fanoherana?
Fampidirana ny semantika
Ny antony mahatonga ny fehezan-teny Ballet avy amin'ny teny Frantsay
Fametrahana ny feonao amin'ny fandefasana feo
Ny fomba fiasa Orff fanabeazana ho an'ny ankizy
Hetsika fohy ho an'ny mpampianatra ESL / EFL
Faminaniana anarana MITCHELL sy ny tantaram-pianakaviana
Ny Bris jiosy
Ny Split Sino-Soviet
Inona no nihatra tamin'ireo Romanina fahiny?
Feno Folklore sy Legenda
Ny tantaran'ny Taom-baovao Sinoa
Mianara momba ny fanao amin'ny Halloween any Alemana